‘चासोक तङ्नाम भव्य हुनेछ’ - Sainokhabar
होमपेज / गफगाफ / ‘चासोक तङ्नाम भव्य हुनेछ’
‘चासोक तङ्नाम भव्य हुनेछ’
मोरङको पथरी बजारको पश्चिममा अवस्थित रहेको सिरिजङ्गा धार्मिक वन र सो आसपास यतिबेला श्रृङ्गारले सजिसजाउ देखिन्छ । पुस ४ गतेबाट उक्त स्थानमा भब्य रुपमा मेला लाग्दैछ सोही कारण उक्त स्थानलाई यतिबेला भव्य रुपले सजिसजाउ गर्न थालिएको छ । प्रत्येक वर्ष प्रकृतिपुजकहरुले मनाउँदै आएको उधौली पर्वलाई नै लिम्बु समुदायले चासोक तङ्नाम मेला लगाउने भएको छ । चासोक तङ्नाम यो पहिलो पटक लगाउन लागेको भने होइन ।
पहिला–पहिला सामान्य रुपमा मनाउँदै आएको यो पर्व वि.सं. २०७१ सालदेखि भने निरन्तर हरेक वर्षको मंसिर पूर्णिमामा सभ्य र भब्य रुपले मनाउँदै आएको
छ । बिशेषतः यो मेला (चासोक तङ्नाम)मा लिम्बु समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेपनि सबै समुदायलाई समेटेर लैजाने सोच र योजना आयोजकको रहेको छ । यसै मेलामा महिला तथा पुरुष भलिबल खेल प्रतियोगिता पनि हुनेछ । जसको प्रथम पुरस्कार राशी ५१ हजार छ भने दोस्रो पुरस्कार ३१ हजार रहेको छ । त्यस्तै महिला भलिबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशी क्रमशः ३१ हजार र २१ हजार रहनेछ । प्रस्तुत छ सोही विषयमा आयोजक समितिका सचिव सन्तोष सिरेङसँग
गरिएको संवाद ः–
चासोक तङ्नामको तयारी कस्तो छ ?
– राम्रै छ, चासोक तङ्नाम मेलाको तयारी अगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ ।
मेला सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक स्रोत पनि चाहिएला नि, कसरी जुटाउ“दै
– आर्थिक स्रोत त चाहिँ नै गयो नि, मेलालाई सु–सम्पन्न गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त यहाँका नागरिकको साथ र आर्थिक स्रोत नै चाहिन्छ । हामीले यस मेलालाई सु–सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गरेका छौं । देश तथा विदेशबाट हामीलाई उल्लेख्य मात्रामा सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । सोही सहयोगले नै यो मेलालाई सु–सम्पन्न गर्नेछौं ।
खर्च पनि त धेरै होला नि कति अनुमान लगाउनुभएको छ ?
– लगभग हामीले अनुमान
गरेअनुसार भन्नुपर्दा १२ लाख जतिको अनुमान गरेका छौं ।
मेलाका आकर्षणहरु चाहि“ के–के छन् त ?
– हामीले यस मेलामा स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति राखेका छौं । मेलालाई मनोरञ्जन दिन चर्चित गायक दिपक लिम्बुलाई पनि ल्याउँदैछौं । यसका साथै मेलामा विभिन्न
मनोरञ्जनात्मक खेल तथा जातीय भेषभुषा प्रर्दशन समेत गर्ने भएका छौं ।
मेलामा लिम्बु समुदायका ब्यक्तिहरुलाई मात्रै समेटिने हो ? प्रष्ट पारिदिनुस् न ।
– झट्ट हेर्दा त्यस्तै देखिए पनि यथार्थमा त्यस्तो होइन । हामीले सबै जातजातिलाई समेट्ने हिसाबले कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौं । सबै जातजातिलाई जातीय भेषभुषा प्रर्दशनका लागि समेत निम्त्याएका छौं ।
मेलालाई अवलोकन गर्न कहा“ कहा“बाट आउ“लान् त ?
– यस मेलामा झापा, मोरङ, इलाम, धरान तथा पूर्वको अधिकांश ठाउँहरुका साथै काठमाडांैबाट समेत सहभागिता जनाउन आउनेछन् भन्ने लागेको छ ।
– प्रस्तुतिः प्रेम केडी